Keenista Muusikada Muusikada ee Carruurta, Lacag Bilaash ah
The Minnesota Sinfonia waa orodestra qolal xirfad leh, oo bixiya riwaayado lacag la'aan ah iyo barnaamijyo waxbarasho oo ku yaalla gudaha iyo hareeraha Twin Cities, oo u ciyaara in ka badan 27,000 oo qof sannad kasta. Orchestra-ga xirfadlaha ah ee nooceeda ah, Sinfonia waxay soo dhaweyneysaa carruurta dhamaanba qaababka bilaashka ah, waxayna u qalanta kala badh ka mid ah adeegyadeeda waxbarasho dugsiyada hoose-dhexe. Sanadkii 1989kii waxaa aasaasay Agaasime Artistic Jay Fishman, Sinfonia waa orodestar qolal xirfad leh oo ujeedadiisu tahay inay u adeegto baahiyaha muusikada iyo waxbarashada Minnesota, gaar ahaan qoysaska carruurta leh, dhalinyarada gudaha magaalada, waayeelka, iyo kuwa haysta dhaqaale kooban.
Minnesota Sinfonia waxay abuurtay mashruuc kombuyuutar oo loogu talagalay inay fursad u helaan kombiyuutarada ku salaysan Minnesota si ay u helaan waayo-aragnimo wada-shaqeyn oo isku-daba-mar ah oo dhiiri galiya farshaxanada si ay u sii wadaan abuurista muusig cusub. Justin Henry Rubin wuxuu ogaaday in uu dhab u yahay waayo-aragnimadiisa uu la shaqeynayo Sinfonia Concierto Pequeño sannadkii 2015. Wuxuu xitaa ku casuumay ardaydiisa udub dhexaad u ah inuu ilaaliyo geeddi-socodka kana faa'iidaysto aragtida uu ku kasbaday. Qeybta dambe ayaa loo doortay in ay noqoto qayb ka mid ah MPR's Spotlight Show Show. "Marnaba waligay ma qabin khibrad qoto-dheer oo shakhsi ah," ayuu yiri Rubin.
"Marnaba marnaba u lahayn khibrad qoto-dheer oo shakhsi ah,". -DR. JUSTIN HENRY RUBIN
Yue Lor, oo ah riwaayad kale oo loo doortay mashruuca, waa shahaadada muusikada ee barashada muusikada ee Concordia College. Wuxuu qorsheynayaa inuu sii wato waxbarashadiisa muusikada ee iskuulada qalinjabinta. Isku darka, Dareemid soocid ah, waxaa la soo bandhigay Febraayo 2015. Barnaamijka komishanku wuxuu bixiyay muusigaan yar yar oo leh fursadda xiisaha leh si uu u guto shaqadiisa oo ay sameysay orchestra xirfad leh, iyo in uu la kulmo geedi socodka ra'yi dhiibashada. Inta uu socdo geeddi-socodka waxa uu heley dhiirigelinta iyo jawaab-celinta muusikada xirfadlayaasha ah iyo kormeeraha, Jay Fishman.